Taariikhda - Jiangxi Alutile Dhismayaasha Qalabka Co., Ltd.
In ka badan 20 sano dabcan adag, ALUTILE horumariyo oo ku koray sahaminta iyo dhaqanka tallaabo tallaabo ah, qalabka biraha isku dhafan ayaa lagu iibiyay in ka badan 100 dal iyo gobollada adduunka oo dhan, noqday shirkadda ugu saameynta badan ee warshadaha.
Laga bilaabo 1995 ~ 2000
1995 Waxa La Aasaasay Jiangxi Hongtai Dhismayaasha Qalabka Warshadaha Co., Ltd. (shirkadda ka horreysay)
1998 Waxay heshay shahaado idman. ee nidaamka maaraynta tayada ee ISO9000.
1999 Kaqeybqaadashada qoritaanka ACP warshadaha heerkiisa koowaad ee qaranka Shiinaha GB / T 17748-1999.
2000 Waxay kuqorantahay Mashruuca Tooshka Qaranka.
2002 aluminium warshad dhismaha Shiinaha Shiinaha - laanta qalabka isku dhafan caag ah
2003 Dhammaystiray sheygii shaybaarka ee tijaabinta nidaamka darbiga biraha.
2003 Samee shaybaarka la soo baakadeeyay oo soo saaray walxaha tijaabada buuxa ee walxaha birta ah ee darbiga daaha ka sameysan ee warshadaha.
2003 Waxa la aasaasay waaxda suuq geynta caalamiga ah, waxay samaysay shabakad iib ah oo caalami ah.
2006 Shirkadihii ugu horreeyay ee ku guuleysta magaca Shiinaha sumcadda ugu sareysa warshadaha.
2007 ALUTILE® alaabooyinka ayaa maray shahaadada Yurub CE.
2007 qadarka iibka dibada ee horumarsan ee nooc u gaar ah warshadaha.
2007 Iyadoo la tixraacayo xogta la midka ah ee baaritaanka badeecada ee caalamiga ah, deji heerka shirkadda oo leh 19 tilmaam muhiim ah marka loo eego heerka qaranka Shiinaha, taas oo ka dhigaysa in ALUTILE ay gaarto heer tayo oo la mid ah noocyada caalamiga ah.
2008 Waxay noqotay Macaamiisha dahaadhadhka gariiradda ee la ansixiyay ee PPG ee Shiinaha.
2008 ALUTILE® alaabtu waxay ka gudubtay imtixaanka sida caadiga ah ASTM iyo BS.
2009 waxaa lagu abaalmariyay "sumcadda caanka ah ee Shiinaha".
2009 Macmiilkii idmanaa ee American Hylar ee Shiinaha.
2018--, ALUTILE wuxuu sameeyay awood wax soo saar 72 milyan oo sqm ah si uu u soo saaro dhowr nooc oo ah walxaha darbiga birta ah, oo leh khadka wax soo saarka ee Aluminium Iskudarka Aluminiumka, All-Dimensional Aluminium Core Panel (3A panel), Solid Aluminium Solid, Guddi Daboolo kulul, Silicon Xabkaha xabagta 'Sealant' iwm taxane ka badan 20 nooc oo badeecooyin ah, ayaa galay safar cusub oo xilliyo cayrsasho ah.